आफ्नै घरको गमलामा यसरी फलाउनुस् टमाटर
October 19, 2020 1206
तपाईं-हाम्रो भा’न्सामा नभई हुन्न, गोलभे’डा । सागसब्जीमा मिसाउन होस् वा अचार बनाउन, गोलभे’डा चाहिन्छ । तरकारी, दाल, अ’चारदेखि सलादसम्ममा गोलभे’डा प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले त हाम्रो भा’न्सामा धेरै खपत हुनेमध्ये एक हो, यो ।
गोलभे’डाले खानेकुराको स्वाद बढाउने, रंग आकर्षक देखाउने मात्र होइन यो आफैँमा पोष’णयुक्त पनि हुने गर्छ । त्यसैले गोलभे’डाको सेवन स्वा’स्थ्यका लागि ला’भदायक मानिन्छ । तर, सधैंभरि गोलभे’डा उपलब्ध हुँदैन । बजार जाने अनुकूलता पनि मिल्दैन ।
त्यसमाथि गोलभे’डा उत्पादन गर्ने क्रममा विभिन्न वि’षादीको प्रयोग गरिएको हुन सक्छ । त्यसो हो भने किन आफ्नै घरमा, आफ्नै हातले उत्पादन नगर्ने ? गोलभे’डा रोप्नका लागि ठूलो ठाउँ चाहिँदैन। गमलामा समेत गोलभेडा उत्पादन गर्न सकिन्छ।
भा’न्साको आसपासमा खाली भाग भए त्यहाँ पनि रोप्न सकियो । धेरैलाई अनुभव नहुन सक्छ, गोलभे’डा कसरी रोप्ने ? सबैभन्दा ठाउँको छनौट गरौं। गोलभे’डा उत्पादनका लागि त्यस्तै ठाउँ उपयुक्त हुन्छ, जहाँ पर्याप्त घाम लाग्छ।
किनभने गोलभे’डालाई दिनमा ८-१० घ’ण्टाको घा’मको उज्यालो चाहिन्छ। ओसिलो ठाउँमा गोलभे’डा राम्ररी फ’स्टाउँदैन । जति सम्भव हुन्छ, उति नै ठूलो गमला छनौट गरौं । गोलभे’डाको बोटलाई एकदमै धेरै पो’षकतत्वको आवश्यकता पर्छ।
यसैले यसका लागि पर्याप्त माटो अटाउने गमला उपयुक्त हुन्छ । जति-जति बोट बढ्दै जान्छ, मल र माटो पनि थप्नुपर्छ । अ’ण्डाको खोललाई धु’लो बनाएर माटोमा मि’साउँदा निकै राम्रो हुन्छ । रोप्ने ठाउँ तयार भयो, गमला तयार भयो ।
त्यसपछि बिउ चाहिन्छ। कुनै पनि गोलभे’डाबाट बि’उ निकाल्न सकिन्छ। यद्यपि आफूसँग भएको गोलभे’डाको बि’उ गुणस्तरीय छैन भन्ने लागेमा स्थानीय नर्स’रीबाट पनि खरिद गर्न सकिन्छ। बिउलाई गमलामा राखेर माथिबाट हल्का माटोले छोपिदिने ।
यसमा थोरैथोरै पानी राख्नुपर्छ, नियमित रुपमा । केही समयपछि बिउ अंकुराउन थाल्छ । एक इन्च जति लामो भएपछि त्यसलाई ग’मलाबाट अर्को गम’लामा सार्नुपर्छ । एउटा ग’मलामा एउटै मात्र बिरुवा रोप्नुपर्छ। गोलभे’डा रोपेपछि त्यसको मा’टोलाई सु’ख्खा हुन दिनुहुँदैन ।
थोरैथोरै पानी सिञ्चित गरिरहनुपर्छ । ग’मला हल्का चि’सो हुनुपर्छ तर धेरै गिलो हुनुहुँदैन । गोलभे’डाको बिरुवा बढ्दै गएपछि त्यसलाई स-साना ल’ट्ठीले थाँ’क्रा लगाउनुपर्छ वा डो’रीले बाँ’ध्न पनि सकिन्छ । यसले गर्दा फल लाग्न थालेपछि बोट भाँचिदैन । गोलभे’डाको बि’रुवामा दिनहुँ पानी राख्नुपर्छ।
माटो र मल पनि बेलाबखत थप्नुपर्छ । सुख्खा पात वा कुहिएको पात, डाँ’ठलाई निकाल्नुपर्छ। यसरी राम्ररी स्याहारसुसार गरेपछि गोलभे’डा राम्ररी उत्पादन हुन्छ।
Prevड्युटीमा खटिएका नेपाल प्रह’रीका असई गोविन्दको ह’त्या, आफन्तको रुवा’बासी (हेर्नुहोस् भिडियो)
Nextनेपालको प्रचार गर्ने भारतीय युवतीको अनौठो तरिका, भिडि’यो भयो भा’ईरल (भिडियो सहित)